Akunandaba uma, ngemva kokufunda lesi sihloko futhi ukufunda iziphakamiso ethulwa zalokho okufanele ukwenze ukuze wenze imali imibuzo yakho ekhanda kuyoba imibuzo engaphezu kuka izimpendulo, futhi kuyoba khona isimo ngokudideka nokungaqiniseki. Kasibili engafanele imibono uzolahlwa, kanye asele nohlu lokufanele ukwenze ukuthi ungakwazi ukukhokhela, usazoba kunalokho enkulu. Abaningi iziphakamiso lapho ungakwazi ukuthola imali, zidinga esincane noma abangenaso nhlobo dolobha ekuqaleni-up. Ngakho konke ngokuphelele ezandleni zakho.
Kuphi ukuqala ngifuna?
Lapho ekhetha zalokho okufanele ukwenze ukuze wenze imali, okokuqala kunakho konke, ngikweluleka ukuba ukhumbule oyithandako. Hhayi lutho ngokuthi best emsebenzini wokuzilibazisa ikhokhwe. Ezikhathini ezinzima oyithandako kungase kukusize ukuba. Futhi khumbula ukuthi ingxenye enkulu imisebenzi ungakwazi enze ekhaya, kungakhathaliseki ukuthi uhlala kuphi. With ukuthuthukiswa ukuxhumana ne-Internet yaqala umberego akude, lapho kukhona khona indawo langempela umsebenzi kanye yokuhlala zitholakala emadolobheni ahlukene ngisho amazwe. Into ebaluleke kakhulu - hhayi umuzwa wokuphelelwa ithemba futhi ukuthini ukukufuna indlela yakhe.
Ukuzibeka impumelelo enkulu kwebhizinisi, ngesinye isikhathi sikhohlwe kobunzima nezinkinga kwadingeka esendleleni eya nazo enkosini yayo. Ngakho-ke, zingazikhetheli zalokho okufanele ukwenze ukuze wenze imali, musa nje bathembele yimpumelelo ekhexisayo. Zilungiselele ubunzima besikhashana, ungadumali. Kwakuthinta ngemuva kokuhluleka kokuqala, abantu abaningi ayeke umsebenzi wabo, kodwa abanye balibheka njengencwadi lwekufundza futhi sifinyelele imigomo emikhulu.
Amaphuzu ambalwa elula yezinzuzo
Ngezansi Bheka ezinye imibono kuphi futhi kanjani imali. Kodwa khumbula ukuthi akulona iphutha jikelele futhi akuzona izindlela kuphela ukuthuthukisa isikhundla sabo sezimali.
Lokhu okuthunyelwe okuhlobene inhlangano ngempumelelo amasevisi ahlukahlukene kanye nenkampani hardware - ifoni, ifeksi, imodemu, ikhompyutha, internet, nokunye. Kulokhu, abasebenzi eyigugu kakhulu yilabo kahle ababeyizazi ezobuchwepheshe zanamuhla nezindlela ukwazi olunye ulimi.
Agent ukudayisa zokuhlala kanye okungezona zokuhlala ingcebo
Ukuthengisa nawe njengoba umkhuthazi sizonikeza ikhomishana ezinhle. Uma othile omaziyo ufuna ukuthengisa, kodwa izinto azihambanga akanayo ukuthi yisikhathi sokuba ufune abathengi, yithuba lakho ukufakazela yena bese uhola imali yokuqala, kanye nezincomo ezinhle.
Indlela kuhle yezinzuzo - ingxenye kulesi sigameko. Jobe izikhangiso avele hhayi kaningi, futhi umsebenzi ngokuvamile olulodwa. Kodwa uma uzibonakalisa kahle, kungenzeka ukuthola actor Ukusekela. Uma uzizwa unethemba esiteji noma ikhamera, kungase nje ithuba lakho.
Road yezokuthutha, itekisi
Uma ungazange ukuthi ngizokwenzani ukwenza imali, kodwa une imoto yakho siqu, ungakwazi park in itekisi noma iya ezokuthutha yangasese.
Kunoma accountant inkampani liyadingeka, kodwa ngezinye izikhathi abanazo izimfanelo ikhono iholo okugcwele umuntu ezengeziwe isimo. Yingakho umsebenzi ezivamile ekhaya accountant. Phambi esithile solwazi nokuhlangenwe nakho, ungakwazi kalula ukuqhuba ibhizinisi ekhaya izinkampani eziningana ezincane.
Lolu hlobo okudingekayo akuvamile kakhulu, kodwa bakhokhelwa kahle. ukuhamba abanikazi inja ukubavumela ukuthi uphumule, bese uhola imali.
Futhi a imibono embalwa wusizo ibhizinisi elincane:
- Ihhotela ekhaya;
- dispatcher ocingweni;
- enkulisa ekhaya;
- Typewriting nokunye.
Lezi yizinto ezimbalwa nje izinketho zalokho okufanele ukwenze ukuze wenze imali. Futhi khumbula ukuthi zonke kusezandleni zakho. Musa uphumule kusheshile futhi ungethuki ngesikhathi nobunzima bokuqala.
Yamaha P-105: incazelo, ukubuyekezwa
Amaminithi omhlangano - ukwenza kahle
5th SS Panzer Division "Wiking": umlando, ukubunjwa, incazelo
Herbert Spencer: Biography nemibono eziyisisekelo. Isazi sefilosofi esiyiNgisi futhi isazi sezokuhlalisana kwabantu ngasekupheleni XIX leminyaka,
Ukuthayipha Touch. Blind eziyishumi-ukuphrinta indlela
Idolobhana Mirny, Arkhangelsk Oblast. amahhotela edolobheni, izithombe
Armored "Scorpion": incazelo kanye izici